Ifulethi elisha lika-2021 eliqinisekisiwe le-Millenial izinkanyezi ezingu-5 + - I-Airbnb
Ifulethi elisha lika-2021 eliqinisekisiwe le-Millenial izinkanyezi ezingu-5 +
Antiguo Cuscatlán, San Salvador, i-El Salvador
Ifulethi elisha, izinkanyezi ezingu-5, elinakho konke okudingekayo. Isiqinisekiso sokuhlala okumnandi. Ukuhlobisa kwesitayela sesimanje seminyaka eminingi. Izici zamafulethi: indawo yokwamukela izivakashi, indawo yokubhukuda, indawo yokusebenzela, indawo yokuzivocavoca, indawo yokukhempa, indawo yokudlala, i-cinema, inkundla ye-volleyball, i-Skylounge nokunye okuningi.
Ifulethi elisha, izinkanyezi ezingu-5, elinesiqinisekiso sokuhlala okumnandi. Ukuhlobisa kwesitayela sesimanje seminyaka eminingi. I-condo ine: indawo yokwamukela izivakashi, indawo yokubhukuda, indawo yokusebenzela, indawo yokuzivocavoca, indawo yomlilo, indawo yemidlalo, i-cinema, inkundla ye-volleyball, i-Skylounge nokunye okuningi
Ukubukeka ukusuka efulethini kuya endaweni eluhlaza, izihlahla nezakhiwo kuhlukile. Isimo sezulu siyasebenziseka. Ukukhanyisa kuyafudumala futhi kunothando. Kuyinto emnandi kakhulu, okwenza kube yindawo emangalisayo yakusihlwa, elungele ingilazi yewayini. Ukuhlobisa kwesitayela seminyaka eminingi kwenza kube ntofontofo. Inakho konke umuntu onomoya omncane okudingayo ukuze abe nesikhathi esintofontofo. UZOBA NESIKHATHI ESIMNANDI!
I-HDTV engu-5" ene- ikhebula ye-premium, I-Netflix
4.96 · 157 okushiwo abanye
Ziningi izitshalo. Kuyindawo yentsha. Kunezakhiwo ezimbalwa endaweni, ngakho-ke ungabona idolobha lase-San Salvador kahle kakhulu kusuka ku-skylounge.
Ngitholakala ngaso sonke isikhathi nganoma yimiphi imibuzo, ukungabaza noma izimo ezingase zivele.
Hlola ezinye izinketho ezise- Antiguo Cuscatlán namaphethelo